Golaha Wasiirada Oo Dhawaan La Soo Dhameystirayo
Madaxda ugu sareysa dowladda ayaa wada tashiyo ka leh dhameystirada Golaha wasiirada Soomaaliya, iyadoo dhowaan lagu wado in la soo magacaabo Wasiiru Dowlayaal iyo wasiir kuxigeeno.
Wararka laga helayo Madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ay shirar ay ka lahaayeen dhameystirida Golaha Wasiirada ay soo gaba gabeeyeen, iyadoo ay diyaarsan yihiin inta badan xubnaha noqon lahaa Wasiir kuxigeenada iyo wasiiru dowlayaasha.
Xubnaha qaar ayaa waxaa ku jira kuwo ku dhow Madaxweynaha, sidoo kale waxaa iska dhex arki doona beelo masraxa Wasiirada iska waayay, waxaa kaloo ku jira qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno la hadal haayo inay ahaayeen musharaxiintii u tartantay xilka Madaxweynaha.
Wararka ayaa sheegaya in bishan inta aanay dhamaan ay suura gal tahay in la soo magacaabo Wasiir kuxigeenada iyo wasiiru dowlayaasha, iyadoo maalmahan ay jireen olole ay wadeen siyaasiyiin badan oo ay ku doonayaan inay iska dhex arkaan muraayada golaha wasiirada.
Si kastaba ha ahaatee Golaha wasiirada ayaa hada bilaabay inay si dar dar ah u howl galaan, iyagoo la wareegay dhamaan xarumihii wasaaradaha ay ku shaqeyn lahaayeen iyo inay dib u howlgeliyaan xafiisyadii dowlada ku shaqeyn lahayd.
« Wasiirkii Ugu Horeeyay Ee Maaliyada Osman Ahmed Roble Oo Geeriyooday
Taliyaha Ciidamada Aaga Towfiiq Oo Xalay La Dhawaacay »